Ogige Okwu Abu Dhabi | World Warner Bro nwere ala isii
Warner Bros. World, Abu Dhabi, ogige isiokwu na -anabata gị n'ime ụwa nke echiche efu. Enwere m obi ụtọ dị ka nwa m nwoke ịga leta ogige isiokwu a, megharịa oge m bụ nwata, na karịa ihe niile nwere ọtụtụ ntụrụndụ. E kewara ogige ahụ n'ime ala isii na-emikpu - Warner Bros. Plaza, mmadụ hiwere, Gulch Dynamite, Njikọ katuunu, Gotham City, na obodo ukwu. Warner Bros. World juputara na ịnya igwe, ihe ngosi, na ihe nkiri maka onye ọ bụla, nnukwu na onye nta. Ọ dị na Agwaetiti Yas, Abu Dhabi, ma kpuchie 1.65 nde square ụkwụ.
Mgbe m banyere n'ebe a, nhazi ahụ tụrụ m n'anya ma chọsie ike ime ihe kacha mma n'ihe niile ebe ahụ nwere inye. Ekpebiri m na m ga-anọdụ ala na njem ọ bụla (nke m na-emeghị n'ihi na m phobia maka elu) na inyocha ọ bụla nook na akụkụ nke ogige (nke m dutifully mere). M na-anọ otu ụbọchị dum ebe a, dị nnọọ ka obi ụtọ dị ka nwa m, ma ebuga m n'ala ndị ọkacha mmasị m maka ahụmahụ imikpu n'ụdị.
Na etiti Warner Bros. Plaza, ị nwere ike ịhụ ihe ngosi mgbasa ozi dị ebube na -atụ anya na mgbidi, ihe nkiri ahụ ga -akpọghachite gị n'oge wee mee ka ị mata ọtụtụ ndị dike dị ebube, nke onye ọ bụla ọzọ na -akwado ma e wezụga aha ọjọọ. Ọchịchọ Bunny. Ọ ga -egosipụta ọtụtụ akara ngosi sitere na fim Warner Bros.
Plaza bụ ihe ngosi nka mara mma nke ihe niile Warner na Golden Age nke Hollywood. Gagharịa n'okporo ámá nke Plaza, nwee mmasị na ụkpụrụ ụlọ, wee họrọ ebe ị ga-eri n'ọtụtụ nhọrọ iri nri ndị a na-enye. Ọ bụrụ na ị nwere chioma, ị ga-enwe ọtụtụ agwa ọkacha mmasị gị maka ụlọ ọrụ ahụ.
Laghachi azụ n'oge ka ị na -abanye Bedrock, ala na -ama jijiji jupụtara na ihe ọchị ezinụlọ na Stone Age. N'ịbụ ndị nwere ihe ngosi mara mma sitere na ihe nkiri ezinụlọ na -atọkarị ụtọ, Bedrock na -enye gị ohere ịbịaru onwe gị nso na ihe odide kachasị amasị gị n'etiti obodo prehistoric ha. Jikọọ na ọmarịcha ọgba-ezinụlọ The Flintstones na The Rubbles - Fred, Wilma, Pebbles, Barney, Betty, na Bamm-Bamm - na agwa Dino na Baby Puss ka ha na-eme ndụ ha kwa ụbọchị.
Ị ga-adaba n'ime ala ọgba aghara, apịtị juru, mara mma nke bụ Dynamite Gulch. Okirikiri ala ịkpa a juputara na ihe egwuregwu na-atọ ụtọ, ihe egwuregwu na-atọ ụtọ, na nnukwu ọdachi nke ga-eme ka onye ọ bụla n'ime ezinụlọ gị nọrọ na mkpịsị ụkwụ ha. Soro Wile E. Coyote na onye na-agba ọsọ okporo ụzọ na ihe egwu ha na-eme nke na-ewelite ntutu isi, lelee Yosemite Sam nke na-agba ọkụ, lelee onye butere itinye mmiri na ọdịda Martian ya, leba anya na Jetsons.
Ọmarịcha obodo na -atọ ụtọ ga -ewepụta akụkụ ọchị gị! Cartoon Junction na -ejikọ ihe odide niile kachasị amasị gị n'okpuru mbara igwe eserese, na -ewetara ha ndụ na mpaghara ihe egwu. Junction Cartoon bụ ebe maka ezinụlọ nwere obere ụmụaka (ndị na -eto eto ruo ihe dị ka isii). Otu n'ime ebe a na-eme egwuregwu nro bụ maka ụmụaka dị otu afọ ruo afọ abụọ. Na -atụ anya ịhụ onye ọ bụla si Tom na Jerry na Ọchịchọ Bunny na Scooby-Doo, n'ime ala juputara na ịnya ụgbọ ala, ihe nkiri na ihe ndị ọzọ. Na-emikpu onwe gị na shenanigans nke agwa agwa, ihe omimi, na ifufe n'oge ọ bụla.
N'ụlọ onye nchọpụta kacha n'ụwa, Batman, na nchịkọta ihe ọjọọ, ndị Super-villains na-ahụ n'anya na-arụ ọrụ n'ime mpụ mpụ, akụkọ obodo mepere emepe nke Gotham City - nke nwere oke egwu, mbara igwe oge ochie - juputara na oge dị egwu, ihe omume dike na ihe ọchị maka onye ọ bụla. Chọta agwa Gotham City kachasị amasị gị The Joker na Harley Quinn gaa Scarecrow n'ọchịchịrị a, ụwa ọjọọ kpughere naanị site na Caped Crusader na nraranye ya ịkwụsị ndị ọjọọ.
Banye n'ime obodo na-egbuke egbuke nke obodo ukwu nke Metropolis, silhouetted megide mbara igwe ọdịda anyanwụ ebighi ebi; ọgbara ọhụrụ, ọtụtụ omenala, nchekwa. Ụlọ ndị nta akụkọ Clark Kent na Lois Lane, ya na akụkọ ifo Daily Planet nọ n'etiti ya, yana n'ezie chebe ya pụọ ​​​​na ihe ọjọọ site na nzuzo nzuzo Clark Kent, otu, na naanị. Superman. Lee mbara igwe nke eze, na -enwe a inụrị maka nchekwube nwoke na ibe ya ndị dike nke Njikọ Njikọ - gụnyere -eche Woman, Green na-ejegharị, na The Flash - ka omume obi ike ha na -amasịkwa ha ka ha na -azọpịa mgbalị ọ bụla iji mebie nkwụsi ike n'obodo akụkọ ifo a.
Ebe ahụ nwekwara ụdị dị iche iche ụlọ ahịa ndị na -ere ngwa ahịa emebere maka Warner Bros. World. Ihe ndị a na-ere n'okporo ụzọ dị nso site na uwe ruo na akpa, iko na agbụ igodo, t-shirts na ihe egwuregwu ụmụaka nwere ọtụtụ agwa. Warner Bros. Abu Dhabi bụ ogige izizi ime ụlọ nke Warner Bros. Ị ga-enwe ike imekọrịta ihe, kwenye aka na were foto Warner Bros kachasị amasị gị kwa.
Warner Bros. nwere ala isii na-emikpu mmiri nwere njem ọgbara ọhụrụ 29, ihe nkiri enyi na enyi ezinụlọ na-emekọrịta ihe, na ihe ngosi ihe nkiri pụrụ iche. O nwekwara ụlọ ahịa azụmaahịa na ebe iri nri. Wepụta oge naanị ka ị na-ekporikwa ihe ndị a. Ka ị na-abanye n'ime ogige isiokwu, mee ka ahụ gị na uche gị banye n'ime ụwa nke iche echiche wee mee ka njem ahụ malite.
By eze 21|2022-05-23T17:53:09+05:30March 11th, 2019|blog|Comments Off na Ọ Exụ, ntụrụndụ na ịhiụrị ọ allụ niile n'otu ebe